ချန်ပီယံဆုအတွက် ပြေးလမ်းကနေ တော့တင်ဟမ် ခြေချော်လဲကျသွားပြီလို့ မာဆင် သုံးသပ် |
ချန်ပီယံဆုအတွက် ပြေးလမ်းကနေ တော့တင်ဟမ် ခြေချော်လဲကျသွားပြီလို့ မာဆင် သုံးသပ်
August 27, 2019 phyo News, Premier League 0
အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ပေါလ်မာဆင်က ရာသီအဖွင့် ၃ပွဲမှာ ၄မှတ်သာရရှိခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ်အနေနဲ့ ယခုရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆု ပြေးလမ်းပေါ်ကနေ ခြေချော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ နည်းပြပိုချက်တီနိုရဲ့တော့တင်ဟမ်အသင်းဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က နယူးကာဆယ်ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၀-၁ ဂိုးနဲ့အရေးနိမ့်ခဲ့ရပြီးနောက် အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် ၇နေရာအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် တော့တင်ဟမ်အနေနဲ့ ရာသီအဖွင့် ၃ပွဲစလုံးအနိုင်ရရှိထားတဲ့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးက လီဗာပူးနဲ့ ၅မှတ်အထိကွာဟသွားသလို ဒုတိယနေရာက ၂နှစ်ဆက်ချန်ပီယံ မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့လည်း ၃မှတ်ကွာဟသွားပါတယ်။ စကိုင်းစပို့တ်သတင်းဌာနရဲ့ဘောလုံးရေးရာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မာဆင်က တော့တင်ဟမ်အနေနဲ့ လာမယ့်လတွေမှာလည်း အဲဒီအမှတ်ကွာဟချက်ကို လျော့ကျအောင် လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
”ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ၀န်ခံစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ တော့တင်ဟမ်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ရပ်ကို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မထင်မှတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အိမ်ကွင်းမှာပဲ နယူးကာဆယ်ကို ရှုံးတယ်။ တော့တင်ဟမ်ကို ကြည့်ရတာ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသလိုပဲ။ အခုလိုရာသီအစမှာပဲ ဒီလိုဖြစ်နေတာက စိုးရိမ်စရာပါ။ သူတို့ဟာ ချန်ပီယံပြေးလမ်းကနေ ထွက်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၃ပွဲပဲကစားပြီးချိန်မှာ လီဗာပူးနဲ့ ၅မှတ်အထိကွာဟနေပါတယ်”
”ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာ နားဝင်မချိုနိုင်တာသိပေမယ့် ဒီလိုလီဗာပူးက ၅မှတ်အသာနဲ့ ဦးဆောင်နေချိန်မှာ တော့တင်ဟမ်အသင်း ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ ခင်ဗျားလောင်းရဲလား။ လူတွေကတော့ ၃၅ပွဲတောင် ကျန်သေးတာပဲလို့ ပြောလိမ့်မယ်။. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ၅ မှတ်က အတော်လေးကြီးမားတဲ့အမှတ်ကွာဟချက်ပါ။ လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၁ပွဲပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဒီရာသီမှာလည်း ပွဲတိုင်းအနိုင်ရထားတယ်။ ဒီတော့ အခုအမှတ်ကွာဟမှုကို တော့တင်ဟမ် လိုက်မီနိုင်ပါ့မလား”လို့ မာဆင်က ပြောပါတယ်။
မာဆင်ဟာ ယခုရာသီမစတင်မီ တော့တင်ဟမ်အသင်း တတိယနေရာရရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပေမယ့် တော့တင်ဟမ်ရဲ့လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် သူ့ခန့်မှန်းချက်အပေါ် သူကိုယ်တိုင်သံသယ၀င်လာပြီလို့ ၀န်ခံပါတယ်။
”ရာသီသစ်မစခင် တော့တင်ဟမ်အနေနဲ့ အဆင့် ၃ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ အသင်းကြီးတွေကိုကြည့်ရတာ ထိပ်ဆုံး ၄သင်းစာရင်းဝင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးဆတူရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တော့တင်ဟမ်ကို ကျွန်တော် တကယ်ပဲမျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လကမှ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတက်ခဲ့တဲ့အသင်းက အခုလိုဖြစ်နေတာတော့ ကျွန်တော်လည်း ရှော့ခ်ဖြစ်သွားတယ်။ အခုချိန်အထိ ကျွန်တော်စိတ်အပျက်ရဆုံးအသင်းက တော့တင်ဟမ်ပါ။ အာဆင်နယ်မှာ ကစားခဲ့လို့ အခုလိုပြောနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး”လို့ မာဆင်က ထပ်လောင်းပြောပါတယ်။
ခနျြပီယံဆုအတှကျ ပွေးလမျးကနေ တော့တငျဟမျ ခွခြေျောလဲကသြှားပွီလို့ မာဆငျ သုံးသပျ
အာဆငျနယျဂန်ထဝငျကစားသမား ပေါလျမာဆငျက ရာသီအဖှငျ့ ၃ပှဲမှာ ၄မှတျသာရရှိခဲ့တဲ့ တော့တငျဟမျအနနေဲ့ ယခုရာသီပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆု ပွေးလမျးပျေါကနေ ခွခြေျောသှားပွီဖွဈကွောငျး သုံးသပျလိုကျပါတယျ။ နညျးပွပိုခကျြတီနိုရဲ့တော့တငျဟမျအသငျးဟာ တနင်ျဂနှနေကေ့ နယူးကာဆယျကို အိမျကှငျးမှာ ဝ-၁ ဂိုးနဲ့အရေးနိမျ့ခဲ့ရပွီးနောကျ အမှတျပေးဇယားရဲ့ အဆငျ့ ၇နရောအထိ ကဆြငျးသှားခဲ့ရပါတယျ။
ယငျးအတှကျကွောငျ့ တော့တငျဟမျအနနေဲ့ ရာသီအဖှငျ့ ၃ပှဲစလုံးအနိုငျရရှိထားတဲ့ အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးက လီဗာပူးနဲ့ ၅မှတျအထိကှာဟသှားသလို ဒုတိယနရောက ၂နှဈဆကျခနျြပီယံ မနျခကျြစတာစီးတီးနဲ့လညျး ၃မှတျကှာဟသှားပါတယျ။ စကိုငျးစပို့တျသတငျးဌာနရဲ့ဘောလုံးရေးရာကြှမျးကငျြသူအဖွဈ ဆောငျရှကျနတေဲ့ မာဆငျက တော့တငျဟမျအနနေဲ့ လာမယျ့လတှမှောလညျး အဲဒီအမှတျကှာဟခကျြကို လြော့ကအြောငျ လုပျနိုငျမှာမဟုတျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
”ကြှနျတျောမဖွဈမနဝေနျခံစရာတဈခုရှိပါတယျ။ တော့တငျဟမျရဲ့လကျရှိဖွဈရပျကို ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ မထငျမှတျခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အိမျကှငျးမှာပဲ နယူးကာဆယျကို ရှုံးတယျ။ တော့တငျဟမျကို ကွညျ့ရတာ ဖရိုဖရဲဖွဈနသေလိုပဲ။ အခုလိုရာသီအစမှာပဲ ဒီလိုဖွဈနတောက စိုးရိမျစရာပါ။ သူတို့ဟာ ခနျြပီယံပွေးလမျးကနေ ထှကျခဲ့ရပွီးဖွဈပါတယျ။ ၃ပှဲပဲကစားပွီးခြိနျမှာ လီဗာပူးနဲ့ ၅မှတျအထိကှာဟနပေါတယျ”
”ဒီလိုစကားမြိုးပွောရတာ နားဝငျမခြိုနိုငျတာသိပမေယျ့ ဒီလိုလီဗာပူးက ၅မှတျအသာနဲ့ ဦးဆောငျနခြေိနျမှာ တော့တငျဟမျအသငျး ခနျြပီယံဖွဈမယျလို့ ခငျဗြားလောငျးရဲလား။ လူတှကေတော့ ၃၅ပှဲတောငျ ကနျြသေးတာပဲလို့ ပွောလိမျ့မယျ။. ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောကတော့ ၅ မှတျက အတျောလေးကွီးမားတဲ့အမှတျကှာဟခကျြပါ။ လီဗာပူးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၁ပှဲပဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ဒီရာသီမှာလညျး ပှဲတိုငျးအနိုငျရထားတယျ။ ဒီတော့ အခုအမှတျကှာဟမှုကို တော့တငျဟမျ လိုကျမီနိုငျပါ့မလား”လို့ မာဆငျက ပွောပါတယျ။
မာဆငျဟာ ယခုရာသီမစတငျမီ တော့တငျဟမျအသငျး တတိယနရောရရှိလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့ပမေယျ့ တော့တငျဟမျရဲ့လကျရှိစှမျးဆောငျရညျကွောငျ့ သူ့ခနျ့မှနျးခကျြအပျေါ သူကိုယျတိုငျသံသယဝငျလာပွီလို့ ဝနျခံပါတယျ။
”ရာသီသဈမစခငျ တော့တငျဟမျအနနေဲ့ အဆငျ့ ၃ရလိမျ့မယျလို့ ကြှနျတျောထငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုခြိနျမှာတော့ အသငျးကွီးတှကေိုကွညျ့ရတာ ထိပျဆုံး ၄သငျးစာရငျးဝငျဖို့အတှကျ အခှငျ့အရေးဆတူရှိနတေယျလို့ထငျပါတယျ။ တော့တငျဟမျကို ကြှနျတျော တကယျပဲမြှျောလငျ့ခဲ့တာပါ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၃လကမှ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲတကျခဲ့တဲ့အသငျးက အခုလိုဖွဈနတောတော့ ကြှနျတျောလညျး ရှော့ချဖွဈသှားတယျ။ အခုခြိနျအထိ ကြှနျတျောစိတျအပကျြရဆုံးအသငျးက တော့တငျဟမျပါ။ အာဆငျနယျမှာ ကစားခဲ့လို့ အခုလိုပွောနတောလညျး မဟုတျပါဘူး”လို့ မာဆငျက ထပျလောငျးပွောပါတယျ။
ပထမဆုံး ၂ ပွဲလွဲခဲ့တဲ့ဟာဇတ် ဗီလာရီးရဲလ်နဲ့ပွဲစပါမယ်လို့ ရီးရဲလ်မျှော်လင့်